UNICEF | YoeYar CG Blog
Tagged with UNICEF …
ကြောင်သားသားကလေးက ကျောင်းသွားရတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းမှာ ဘာတွေ ရှိမလဲ။ ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မလဲ။ တွေးတွေးပြီးကြောက်နေတော့ ကျောင်းမသွားချင်တော့ဘူး။ မေမေကြောင်က သားလေးရင်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ သိတယ်လေ။ ဒီတော့ သားလေးကို မွှေးမွှေးပေးပြီး ကျောင်းမှာ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေအတွက် ခွန်အားတွေ ပေးလိုက်တာပေါ့။
ဒီ Animation ကိုလုပ်တော့ Version နှစ်မျိုးလုပ်ခဲ့ရလို့ တော်တော် အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ ကားလေးပါ။ အသံကို မကြိုက်တာနဲ့ အရုပ်ကမြန်နေတာနဲ့ အရောင်က ရင့်နေတာနဲ့ …. စသည်ဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြင်ခဲ့ရတာ။ သူ့ရဲ့ မူရင်းဇာတ်လမ်းက ကလေးပုံပြင်စာအုပ်လေးထဲက။ အဲဒါကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် Storyboard ပြန်ဆွဲ Character ပြန်ဆောက်လိုက်တယ်။
Model, Animation တွေကို 3dsmax ထဲမှာပဲဆွဲတယ်။ Background ကို Photoshop နဲ့ ပွတ်ပြီး Textures တွေကို Bodypaint3D နဲ့ခြယ်တယ်။ အသံတွေကိုတော့ ကွန်ပျူတာမှာ မိုက်တပ်ပြီး ဒီတိုင်းပဲ သွင်းလိုက်တယ် (စတူဒီယိုဖိုး သက်သာတာပေါ့ :D )။ သားသားနေရာမှာ ပီးပီးလေးက သရုပ်ဆောင်တယ်။ မေမေကတော့ UNICEF က ဂျူလီယန်ဆိုတဲ့ အစ်မကြီး။ အစ်မအသံက နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ရုံးရောက်တုန်း Dialog တွေ ဖတ်ခိုင်းပြီး အသံသွင်းထားလိုက်တာ။ Animation တွေလုပ်တော့ ပုံမှန် Speed နဲ့ Play တော့ မြန်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီကားလေးက မေတ္တာနဲ့ လွှမ်းခြုံနေရမှာမို့လို့ အကုန်လုံးက နူးညံ့ငြင်သာသိမ်မွေ့ရမယ်ဆိုပဲ။ ဒါနဲ့ Frame Rate တွေ လိုက်လျှော့လိုက်တာပေါ့ :D ။
“သူငယ်ချင်းတို့လည်း အားငယ်စိတ်တွေဝင်လာရင် အနမ်းလက်ဆောင်ကို စမ်းသုံးကြည့်ပါလား။”
Kissing Present from Lionslayer on Vimeo.
သားသားက ရေမချိုးချင်ဘူး။ ရေကြောက်နေတယ်။ သင်သာ မေမေ ဖြစ်မယ်ဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ “လာစမ်း သောက်ကောင်လေး” ဆိုပြီး ရေချိုးဇလုံထဲ ပစ်ထည့်မလား။ “မချိုးလည်း နေဟာ” ဆိုပြီး ပေယျာလကံ ပစ်ထားမလား။ မှတ်လောက်သားလောက်ရှိအောင် ဆော်ပစ်မလား။
UNICEF workshop မှာ ဆရာ အော်ပီကျယ်က အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုသုံးပြီး ကလေးလေး ရေချိုးအောင် အမေလုပ်သူက မေတ္တာတရားနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားပုံကို ကာတွန်းတစ်ပုဒ် ဆွဲပါတယ်။ အဲဒါကို NGO က လူတွေက အင်မတန် သဘောကျကြတဲ့အတွက် Animation လုပ်ဖို့ ကျွန်တော့်တာဝန် ဖြစ်လာတယ်။
ကာတွန်းက တော်တော်တိုတဲ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဂီတမိတ်က ကိုကျော်စွာထွန်းက မြူးမြူကြွကြွ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးပေးပါတယ်။ ဟေမာန်မင်းဇော်ကပဲ သီချင်း ဆိုပေးပါတယ်။ ကလေးနေရာမှာတော့ ဂူဂူးညီလေး ပိပိ ထင်တယ်။ ဇာတ်ကောင်တွေကို နဂိုသရုပ်ဖော်ပုံက ကွဲထွက်မသွားအောင် 3D မှာ သတိထားပြီး Model လုပ်ရပါတယ်။ Render ကို 2D အမြင် ရအောင်လုပ်ပြီး လိုတာနည်းနည်းကို FlashMX မှာ ဖြည့်ဆွဲတယ်။
အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ကြည့်ရှုနားဆင်ခံစားကြည့်ပါဦး။
Thar Thar is taking bath from Lionslayer on Vimeo.
3D/Animations/Idea & Creativity
“စာမတတ်သေးတဲ့ သုံးလေးနှစ်ရွယ် ကလေးလေးတွေ ကြည့်ပြီး အနည်းဆုံး ကိန်းဂဏန်း ရေတတ်သွားအောင် သင်ပေးနိုင်တဲ့၊ သင်နေတယ်လို့လည်း မခံစားရစေတဲ့ Animation တစ်ခုလုပ်ရမယ်။”
အဲဒီစကား အကြားမှာ အီလည်လည်ဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့မျက်နှာ မြင်ယောင်သာ ကြည့်ပါတော့။ ကတိက ပေးပြီးသားဆိုတော့ မလုပ်လို့လည်း မဖြစ်။ အချိန်ကလည်း ကပ်နေပြီ။ အကြိတ်အနယ် ခေါင်းချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးကြပြီးတဲ့နောက် သီချင်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အိုင်ဒီယာရသွားတယ်။ သမီးလေးနဲ့ အဖေကြီး လမ်းလျှောက်ထွက်လာရင်း လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့တဲ့ နေ့စဉ်မြင်နေကျ အကောင်တွေ အသီးတွေရဲ့ အရေအတွက်ကို သမီးလေးကို သင်ပေးမယ်ပေါ့။
သီချင်းကို အားရပါးရလည်းစပ်ပြီးရော နံပါတ်ရှစ်ပြီး ကိုးမလာတော့ဘူး။ ဟာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ သံစဉ်နဲ့ စာသားနဲ့လည်းကွက်တိ။ ဘယ်လိုမှ ထိုးထည့်လို့ မရတော့ဘူး။ အချိန်ကလည်းကပ်နေပြီ။ အဲဒီမှာ လူကြီးတစ်ယောက်က ထပြောတယ်။ ရပါတယ် ရှစ်လောက်ထိ သိလည်း ဆိုးပါဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ… ။
တေးရေးက လမင်း။ တေးဆိုက အဖေနေရာမှာ ကိုမင်းမင်း။ သမီးလေးနေရာမှာ ခင်လပြည့်ဝန်းဆိုတဲ့ ကလေးမလေးထင်တယ်။ Animator and everything else ကတော့ ကျွန်တော်။
နီးစပ်ရာလူဆီက မေးပေတော့… ရှစ်ပြီးရင် ဘာလဲ။ :D
1234 from Lionslayer on Vimeo.
ဒါလည်း နှစ်ရက်ခွဲလောက်နဲ့ အမြန်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ Animation လေးတစ်ခု။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဆယ်ယောက်ရှိရင် တစ်ယောက်က Disable တဲ့။ ယောကျ်ားနဲ့ မိန်းမလူဦးရေကလည်း အချိုးတူလုနီးပါးရှိတယ်။ ဒီတော့ကာ Media တစ်ခုခုမှာ အားလုံး “all” ဆိုပြီးပြရင် ယောကျ်ားလေးနှစ်ယောက်၊ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်၊ Disable တစ်ယောက်အနည်းဆုံးပါသင့်တယ် ဆိုပါတယ်။
ဒီ Animation ထဲမှာတော့ Disable တွေဟာလည်း သာမာန်ကလေးတွေနဲ့ တူတူကစားခွင့် ပျော်ရွှင်ခွင့် ရှိပါတယ်ဆိုတာ ဦးစားပေးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွေနဲ့ အရောင်တွေကို FlashMx နဲ့ ဆွဲတယ်။ Animation အတော်များများကို 3DsMax နဲ့ ဆွဲတယ်။
Let’s PlayTogether from Lionslayer on Vimeo.
Animations/Idea & Creativity
2005 က ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဂူဂူးအဖေ ဆက်ပေးလိုက်တာ ကျွန်တော်လည်း UNICEF Workshop တစ်ခုမှာ Media လောကသားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ လူကြီးလူကောင်း ပေါက်စန သွားလုပ်ခဲ့တယ်။ အင်း နည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့ ဘူဖေးနဲ့ လက်ဖက်ရည်လောက်ပဲ မှတ်မိတော့တယ် :D ။
အကြောင်းအရာက အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ( ငါးနှစ်အောက်) ကလေးတွေကို ပညာပေးဖို့။ ဆရာကြီးပုံစံနဲ့ ပြောပြနေတာလည်းမဖြစ်ရဘူး။ ပျင်းစရာလည်းမကောင်းရဘူး။ ကလေးတွေလည်း လိုလိုချင်ချင်နဲ့ ကြည့်ရင်း၊ ဖတ်ရင်း၊ နားထောင်ရင်း တစ်ခုခု ပညာရပြီးသား ဖြစ်ရမယ်။ ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးလိုတွေးရမယ်။ မိမိလက်ရှိ လူကြီးလူကောင်းဦးထုပ်တွေ၊ ငါဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ဘာကောင် စတဲ့ ဦးထုပ်တွေကို ချွတ်ထားခဲ့ရမယ်လို့ Workshop ကို ကမကထလုပ်သူ ဂျာမန်သူ ပရော်ဖက်ဆာ ဘာဘရာက ပြောပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် အဲဒီကို ဆရာ အော်ပီကျယ် (APK) ၊ ဆရာအတ္တကျော်( ATK) ၊ ဆရာမ ဂျူးတို့လည်း လာကြတယ်ထင်တယ်။
ATK နဲ့ APK ပါလို့သာ ပွဲစည်တယ် ပြောရမယ်၊ အချိန်အများစုမှာ ဘာဘရာပြောသမျှနားထောင်လိုက်၊ Group Activities လေးတွေ လုပ်လိုက်နဲ့ ဟုတ်နေကြတာပဲ။ Workshop စလို့ တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာပဲ ဝပ်ရှော့အပြီးမှာ Product တစ်ခုခု ထွက်ရမယ်ဆိုပြီး ဘာဘရာက ဖိအားပေးတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေတော့ ဘယ်လိုနေတယ်မသိ၊ Animator လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူး ဖြစ်ရတယ်။ ဒါနဲ့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး နေ့မအိပ်ညမအိပ် နှစ်ရက်လောက် ကွန်ပျူတာရှေ့ထိုင်လိုက်တော့မှ တစ်မိနစ်ခွဲစာ Animation လေးတစ်ခု ဖျစ်ဖျစ်မြည်အောင် ထွက်လာတယ်။ သူငယ်ချင်းကြီး ဂူဂူးကလည်း အားကိုးရသလားတော့ မမေးနဲ့။ ဘေးနားက ကာတွန်းစာအုပ်လေးဖတ်လိုက်၊ ဂျာနယ်လေးဖတ်လိုက်နဲ့ အင်မတန် အကူအညီ ရရှာပါတယ်။ ( :D အမှန်တော့ မီးမလာလို့ သူတို့အိမ် ညအိပ်ညနေ သွားလုပ်တာ။ အဲဒီကပဲ မနက်စာညစာ ပါးဖြဲနားဖြဲ စားလာတာ။)
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်တော့ လက်ဆေးတဲ့ အကြောင်းအရာကို လုပ်ဖို့ ဝိုင်း သဘောတူတြတယ်။ နောက်ခံသီချင်းကိုတော့ ကိုမင်းမင်းရေးပေးတာ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာ အဆိုအတီး သူတစ်ယောက်ပဲ ကောင်းကောင်းပါတာဆိုတော့ ဘေးနားကနေ နှုတ် (-) ဖြင့် မြှောက်စား (x÷) ပြီး သွားပေါင်း(+)လိုက်တာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရလာတယ်။ အဲဒါကို ညာတာပါတေးနဲ့တခြားအဖွဲံမှာပါနေတဲ့ ဂီတမိတ်က ကိုကျော်ကျော်နဲ့ ကိုကျော်စွာထွန်းတို့ကို တီးခိုင်းပြီး ဂီတမိတ်က ဟေမာန်မင်းဇော် ကပဲဆိုပေးတာ ။
ဝပ်ရှော့နောက်ဆုံးနေ့မှာ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Product လေးတွေ ပြကြတော့ တချို့က သရုပ်ဖော်ကာတွန်း၊ တစ်ချို့က ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်း၊ တစ်ချို့က သီချင်း၊ ကျွန်တော်တို့က Animation ပြကြတယ်။ အဲဒီနေ့မှ ဝေဖန်ကြ ၊ ချီးကျူးကြနဲ့ တော်တော် လေးပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ APK ကလည်းပြောပါတယ် ပုံမှန်ဆိုရင် သုံးလလောက် အီလေးဆွဲပြီး လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို ဒီလို နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့ ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာဟာ Motivation ဟာ အဓိကနေရာကပါကြောင်းပါတဲ့။
နောက်ပိုင်း ဒီ Animation လေးကို မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းမှာပြတော့ ကြိုက်ကြလို့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြည့်ကြပါသတဲ့။ လက်ဆေးလိုက်ကြသဟာလည်း တဗွမ်းဗွမ်းနဲ့ ဗွက်ပေါက်ပါကရောတဲ့။ နောက် Workshop တစ်ခုမှာ အဲဒီကျောင်းက ဆရာမတစ်ယောက်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။ အဲဒါမျိုးကြားရရင် ကျွန်တော်လည်း ခံနိုင်ရည် သိပ်မရှိဘူး၊ ပါးစပ် နားရွက် တက်ချိတ်နေတာ။ :P
Let’s wash our hands from Lionslayer on Vimeo.